နားခိုရာ: Burmese Net Worker
Burmese Net Worker
ကြော်ငြာလိုက်ပါဦးမယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘလော့လေးပါ။ Networking အကြောင်း သိကောင်းစရာ လေးတွေ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ.. သူက တင်းနစ်လဲကြိုက်တော့ တစ်ခါတစ်လေ တင်းနစ်အကြောင်းတွေ လည်း ဖတ်လို့ရတယ်။ အမေရိကားက အလုပ်သမားဘ၀အကြောင်း အလုပ်တွေ အကြောင်းလေးတွေလဲ ရံဖန်ရံခါရေးတတ်သေးတယ်။ ပို့်စ်အရေအတွက်နည်းနေသေးပေမဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ပို့စ်လေးတွေပါပဲ။ ဘလော့ ပိုင်ရှင်က ကိုကျော်ကျော်ခိုင်ပါ။ Networking ပိုင်းကို တကယ့်ကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ New York မှာနေပါတယ်။
သူ့ကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရောက်မှ စသိတာပါ။ ၁၉၈၉ လောက်မှာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်စာရင်းမှာ ကျွန်တော်က Computer Science က ခုံနံပါတ်-၁၊ ဘေးကပ်ရက်မှာက Computer Technology က ခုံနံပါတ်-၁ မောင်ကျော်ကျော်ခိုင် အဘအမည် ဦးထွန်းခိုင်... ထွန်းခိုင် (မြတ်ချွာဖျား...ငါ့နံမည်ကြီးပါလား) ဆိုပြီးတွေ့တော့ အဲဒီကတည်းက စိတ်ထဲသတိထားမိသွားတာပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရယ်။ ကျောင်းစတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးကို ရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။ သူက မိထ္ထီလာကဆိုတော့ ပင်းယဆောင်မှာနေရတယ်။ ဒုတိယနှစ်လောက်ကစပြီး ကျွန်တော်လည်း ရက်အတော်များများမှာ အဆောင်မှာ သွားနေဖြစ်တယ်။ သူ့အခန်းမှာပေါ့။ ၀တ်စရာအ၀တ်အစားနဲ့ ပိုက်ဆံမရှိတော့မှ အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်တယ်။
ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက အမေရိကားက သူ့ဦးလေးက ကွန်ပျူတာတွေ CDတွေပို့ပို့ပေးတော့ အဆောင် ကျောင်းသားများ သူ့ကျေးဇူးနဲ့ ပင်းယမှာ ကွန်ပျူတာဆော့ခွင့်ရကြပါတယ်။ တတိယနှစ် လောက်က စပြီး Athena ကိုစထောင်ကြတော့လည်း အလုပ်အတူလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ လက်ရှိ iNTEGRA မှာ PC တစ်လုံး install လုပ်ပြီ ဆိုရင် အခုထိ default passward ကို KKK ဆိုပြီးပေးနေတုန်းပဲ။ ပြီးမှ ပြန်ပြောင်းပေါ့။ အဲဒါ မောင်ကျော်ခိုင်ရှိကတည်းက Server တွေ install လုပ်ရင် သူ့နံမည်သူထည့်ထားတာကို အခုထိ ကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးနေမိတုန်းပဲ။ အဲဒီတုန်းကတော Windows NT 4.0 ပေါ့။
မှတ်မှတ်ရရ 1998 World Cup ဘောလုံးပွဲ အုပ်စုပွဲတွေ အပြီးလောက်မှာ ကျော်ခိုင် အမေရိကားကို ထွက်သွား တာပါ။ မသွားခင် ရန်ကုန်မှာ M.C.Tech ပြီးအောင် ယူသွားတယ်။ ဟိုရောက်ပြီး မကြာခင်ပဲ MCSE ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက MCSEအရေအတွက်က ကအခုလောက် မပေါသေးဘူး။ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ Cisco လိုင်းဖက်လိုက်ပြီး CCIE ရပြီးသွားပြီ။ သူ့ဘလော့က ပို့စ်တွေကို သွားဖတ်ရင်း Networking နဲ့ ပတ်သက်ရင် အခမဲ့ အကြံဥာဏ်တွေလည်း တောင်းနိုင်ပါတယ်။ :)
Posted by little moon at 10:30 AM
Haha.. I already called him once to ask about BGP
Amaury Bischoff set for Gunners
Breakfast for birds
Nadal won Rogers Cup
Rogers Cup Quarter final
Zawgyi font official site
Federer was kicked out from Rogers Cup
ဗိုက်ပူအောင် ယာဂုဆွမ်းကပ်မယ် ...
Algorithm Ink နဲ့ ပုံလှလှဆွဲရအောင်
On Looking at Things
Arsenal နဲ့ 2008-09 ဘောလုံးရာသီအစ
New Arsenal Away Kit
eMule peer-to-peer file sharing
Nasri's move completed
GTalk Lab Edition
Nardal beats Federer, 2nd time
Williams take it all
အမည်မသိပန်း၊ အမည်မသိ စေတီအို
Ph.D. ဆိုတာ...... :P
Shochu IIchiko ..... great !
La Prophetie d'Avignon
Wimbledon Ladies' Qtr. Final